အကာအကွယ်အဝတ်အစား အက်ဆစ်နှင့် အယ်လ်ကာလီ စမ်းသပ်မှုစနစ် စက်ရုံ - တရုတ် အကာအကွယ်အဝတ်အစား အက်ဆစ်နှင့် အယ်လ်ကာလီ စမ်းသပ်စနစ် ထုတ်လုပ်သူများ၊
DRK453 အကာအကွယ်အဝတ်အစား Anti-acid နှင့် Alkali စမ်းသပ်မှုစနစ်
DRK453 အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီစမ်းသပ်မှုစနစ်တွင် အစိတ်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်- အကာအကွယ်အဝတ်အစားအရည်များ ခုခံနိုင်စွမ်းစမ်းသပ်သူ၊ အကာအကွယ်အဝတ်အစား hydrostatic resistance tester နှင့် အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအချိန်စမ်းသပ်မှုတို့ ပါဝင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် 1. အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဤစက်ပစ္စည်းအား နိုင်ငံတော်စံနှုန်းအသစ် GB 24540-2009 “အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ အက်ဆစ်အခြေခံ ဓာတုပစ္စည်းအကာအကွယ်အဝတ်အစားများ” နောက်ဆက်တွဲ D ကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပြီး အရည်-ပြန်ထုတ်ခြင်းအား ဆုံးဖြတ်ရန် အဓိကအသုံးပြုသည်...
DRK713 ထိုးဖောက်ခြင်းအချိန်စမ်းသပ်ခြင်းအား အထည်အလိပ်အက်ဆစ်-အခြေခံဓာတုပစ္စည်းကာကွယ်ရေးအဝတ်အထည်များ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်နှင့် LA (အလုပ်သမားဘေးကင်းရေး) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားရန် အက်ဆစ်အခြေခံအကာအကွယ်အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။အက်ဆစ်နှင့် အယ်လ်ကာလီဓာတုပစ္စည်းများအတွက် အကာအကွယ်အ၀တ်အထည်များအတွက် စမ်းသပ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်- GB24540-2009;အင်္ဂါရပ်များ- 1. လျှပ်ကူးနည်းလမ်းနှင့် အလိုအလျောက် အချိန်ကိုက်ကိရိယာ၏ နိယာမကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။
စမ်းသပ်သည့်အရာ- အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီဓာတုပစ္စည်းများအတွက် အကာအကွယ်အဝတ်အစားများ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ချိန်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း DRK713B ထိုးဖောက်မှုအချိန်စမ်းသပ်ကိရိယာကို အက်ဆစ်အခြေခံဓာတုပစ္စည်းအကာအကွယ်အဝတ်အထည်များ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ချိန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု- GB24540-2009 အကာအကွယ်အဝတ်အစား အက်ဆစ်-ဘေ့စ် ဓာတုကာကွယ်ရေးအဝတ်အစား နောက်ဆက်တွဲ G ၏ GB 24539-202X “အထည်အက်ဆစ်-ဘေ့စ် ဓာတုဗေဒ အကာအကွယ်အဝတ်အထည်များ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ချိန်အတွက် စမ်းသပ်နည်း” DRK713B ထိုးဖောက်မှုအချိန် စမ်းသပ်ကိရိယာ အင်္ဂါရပ်များ- 1....
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- အက်ဆစ်နှင့်အယ်ကာလီဓာတုပစ္စည်းများအတွက် အထည်များ၏ hydrostatic ဖိအား (static acid pressure) ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း စမ်းသပ်ခြင်း DRK711 static acid pressure tester ကို fabric acid-base chemical ၏ hydrostatic pressure resistance (static acid pressure) ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ အကာအကွယ်အဝတ်အစား။၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်နှင့် LA (လာအိုန်) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကိုင်တွယ်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ရန် အက်ဆစ်အခြေခံအကာအကွယ်အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။စမ်းသပ်ယူနစ်များနှင့် သိပ္ပံသုတေသနဌာန...